Warqad in dowladda Ruush (Ruushka) | Cosmos koobi karayn
Warqad in dowladda Ruush (Ruushka)
Posted in geesta . biology . sharciga . dhaqaalaha
+++Nuqul ka mid ah waraaqaha ee Dowladda Ruushka (Ruush Federation)+++
aad State (Ruush Federation) Waxaa la siiyaa fursad ay ku biiraan Empire of Cosmos waynyahay ku saabsan iskaa wax u qabso-iskaa wax u qabso.
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan qaabka iyo xubno ka mid ah meelaha ay yihiin tilmaansado dukumintiga. Dukumiintiyada lagama maarmaan ah waxaa ku lifaaqan warqad ku.
TK. waqtiga dhismaha oo dhan siyaasadeed ku yaalaa on Earth ma waxaa jira dad badan – matalaadda Cosmos waynyahay ay go'aansatay in ay dadajiso geedi socodka taageero. Mid ka mid ah taas oo ah suurtagalnimada in this.
Text Final Qaadirka Empire waynyahay Cosmos la go'aamin doonaa ka dib ururinta ah saxiixyada loo baahan yahay ka dhinacaaga.
On jawaabta aad leedahay hal bil. Fadlan ku dar in muddo this, Haddii aad u baahan tahay waqti dheeraad ah si ay u ururiyaan ah saxiixyada loo baahan yahay, oo muujinaysa taariikhda ku habboon. Aamusnaanta waa la qaadi doonaa sidii jawaab diidmo ah.
Dukumiintiyada saxiixay waxaa loo diri karaa qaab doc, PDF, jpeg, gif, PNG haboon saxiixyada digital.
Waad ku mahadsan tahay iskaashiga aad.
meel bannaan oo aan dhammaanayn.
Your racfaan ka 10.06.2014 g. in Madaxweynaha Ruushka
Federation diiwaan A26-20-67016891 ka 11.06.2014g.
Your fariin ma u dhigma shayga 1 articles 7 ee federaalka
sharciga 2 May 2006 sano No 59-FZ "On amarka tixgelinta rafcaanka
muwaadiniinta Ruushka "Haddaba siin jawaab ku saabsan mudnaanta uu
content suurtogal ma aha.
Taliyaha Taliyaha Waaxda
codsiyada ku qoran oo
asalka ah waxaa lagu halkan http heli karaa://www.infinitecosmos.info/docs/670168.pdf
++++++Letter Second +++++++
Nasiib darro jawaabtu qofka aad idman ma aha jawaabta oo aan la aqbali karin, TK. aqbali karo fursadaha kaliya labo: togan ama taban.
sugayaan jawaab dhamaado waayo, gobolka 09 July 2014 sano ee kaalendarka Gregorian. Waxaan idin xusuusiyo, in la'aanta ah ee jawaabta jawaab diidmo ah.
Sharciga ayaa loo gudbiyaa by aad kaaliyaha oo ahaa lid ku ah) Faqrada Hordhaca Xeerarka Asaasiga ah waynyahay Cosmos ee, Hantida gaar ahaaneed taas oo ah Dhulka. taas oo uu dhigayaa:
“iyo) Waa sharci darro in uu ku qasbo ama sasabaya ashkhaas hagto, oo ku yaalla jirkooda loo baahan yahay in la joogo in Caalamka qaarkood noqon, si uu ku rumoobo naftoodu jeclaydna. Ama ku fikirno oo ku saabsan waxa, Waxa ay ku boorrinayaan in ay.”
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan sharciyada Cosmos koobi karayn waxaad ku baran kartaa wax soo saarka rasmi ah
Haddii aad qorsheyneysid inaad danbe sheegi, in saaxiibkiisa ahaa wakiilka ah gobolka dagaallamaya aad la – iyo xataa cadaawayaashiisa waa cawaaqib suurtogal.
Waad ku mahadsan tahay iskaashiga aad,
Iyadoo la tixraacayo sharciyada waynyahay Cosmos, ka warqadihiisa waa in uu ahaado, Pravitestvo in Ruushka uu rabo si uu u joojiyo jiritaanka gaar ah. Sidaasaa khatar jiritaanka shay noolaha iyo qalab, ku yaal dhulka ee dalka. In si kale loo dhigo, Gobolka ayaa sheegay diidan in ay ku sugan Cosmos koobi karayn, laakiin waa ugu yaraan Hijrooday ee caadiga ah. Si taas oo uu hore u xukuntay.
Nasiib darro, kiiskan, dabeecadda kaala hadli doona af saafi ah oo dhan: codad dhulgariir, shilalka, ciidanka Hurricane oo durriyadii Wind hagto ah, buunankay xaq on target. Taas macnaheedu waxa weeye, oo dhaawici ma aha oo kaliya aad “gaar ah” dowladda, laakiin dalalka kale, ugu yaraan, oo dhan nidaamka qoraxda. Maxay kula tahay: waxay u baahan tahay?
“In gaaban, macaamiloon Habeenka.” (sida aad jeceshahay in la yidhaahdo) Oo haddii aadan rabin inuu ku soo shirtagi in derbigii la mari karin ee Habeenada Kosmicheskiyh, oo aad rabto si ay u awoodaan si ay u helaan xitaa fursad – aad masixi ka wajiga ah koox dambiilenimo, terrariziruet oo ka Republic of Belarus labaatan sannadood iyo xoogga dalka iyo waxa ay qabanayaan in aamusnaanta. Maxaa yeelay, aamusnaanta – waa qurux badan. Oo sidaas samaynaya, iyaga ciidda u lahayn in ay, ash jirin, ur, mana dhaadeen ka hadhay burcad dhan, carruurtooda, iyo dheddigga oo dhan, kaas oo ay isku iyaga la. Maxaad difaaco fashiistaha ah, oo noqday gaashaan aadanaha on “dhimashada dhulka ee” Dagaalkii labaad ee dunida?
Oo weliba, ma aha whimsy caadiga ah, iyo ciqaabta ururka colaadda military u dhexeeya Russia iyo Ukraine, gacanta, taas oo waxaa la dhigay burcad this. Maxaa yeelay, nacayb 90% dadweynaha ay adag tahay in jebiyaan, haddii ajaanibta iman doonaa oo waxaad ku tidhaahdaa,, in “adeerkiis wanaagsan”. Oo waxaa oo dhan ku dhacay, maxaa yeelay,, in “adeerkiis” duračok. miisaaniyadda gaarka ah iyo ma profukali “dagaal oogayaasha”, waxaa, malaha, ugu yaraan lacag qeybtii dalkan mendicant.
… in la sii …